Hiigsigii iyo himiladii fogayd: Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar (1952kii – 2012ka) Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale | Araweelo News Network (Archive) -
Hiigsigii iyo himiladii fogayd: Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar (1952kii – 2012ka) Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale
“Gurigaagu waa sharaf, Goonyahaagu waa nuur,
Gogoshaadu waa nabad,
Guushana dalkayska leh,
Galladdana adaa mudan.”Maansadii Galaal ee Hadraawi,
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale
Haa….Galab Isniineed ayay ahayd. Waa 13kii Meey, 2012ka. Waa bishii amranayd ee aan bilahaba ku jirin. Maalin kale oo taariikheed ayaa ku soo darsantay. Markii aan qadeeyay ayaan yar jiifsaday. Wax aan badnaynba haddii aan jiifay, ayaan xusuustay in Jaamicadda Hargeysa aan ballan ku lahaa 4.15 saacadood ee galabnimo.
Shalay gelinkii danbe ayay Prof. Sihaam iga codsatay in aan u imaaddo berri gelinka danbe, haddii Eebbe idmo si aan cashar kooban oo gole-ka-fuul ah uga bixiyo kaalintii ay haweenka Somaliland ka soo galeen halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee SNM horseedka ka ahayd, dibuheshiisiintii, nabadayntii iyo geeddi-socodka dimuqraadiyadeedba. Hurdo fiican ma seexan e’ markiiba waa aan kacay. Ku-talo-galku wuxu ahaa in aan ilaa 30 daqiiqadood fasalkaa ku qaato oo dumar kale ayaanu wadaagaynay xiisaddaa haweenka iyo kaalintooda ku saabsanayd. Fasalku wuxu ahaa mid baranayay sida xiisadaha loo maareeyo. Macallimadda Sihaam ilaa lixdan ayay ardayda iigu sheegtay bal se ilaa kala badh ayaa soo xaadiray.
30kii daqiiqadood ayaa ilaa saddex saacadood ila gaadhay oo gabbalkiiba waa uu dhacay. Laba tilifoon oo aan sitay mid wuu xidhnaa, midna waan aammusiiyay, waa se uu furnaa. Markii aan casharkii ka baxay, ayaan tilifoonkii xidhnaa furay, kii aammusnaana daalacday, bal in cidi ila soo hadashay. Waa 16 tilifoon oo soo dhacay oo aan seegay. Magacyadii iyo lambarradii ayaan dhex qaaday. Laba Xildhibaan ayaa ku jiray oo aan hore u heli waayay waxa galabnimadan igu kulmiyay.
Aniga oo xurmaynayay xilka ay sidaan, saaxiibbo duug ahna aanu ahayn, iyagii ayaan dib ugu celiyay sidii dhaqanka ii ahayd. Ma qaadi waayo tilifoon igu soo dhacay, mid I seegayna kuma celin waayo. Sidashada tilifoonku waa xil, mana fiicna in aad xilkaa cid kale u dhiibato oo waa mas’uuliyad adiga kuu gaar oo ku taxan xilalka aad siddo iyo dhaqankaaga dadnimo. Waxaan ku horreeyay Xildhibaan Xaashi Xuseen Caabbi. Bariido aad u gaabnayd ka dib, si naxdin leh ayuu iigu yidhi: “Cabdishakuur baa dhintay.” Cabdishakuurrada aan aqaannaaba ma badnayn. Magacan Cabdishakuurna aad loogalama baxo Somaliland oo wuxu kaga badan yahay degellada kale ee Soomaaliyeed, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kililka Shanaad. Xusuustaydii iyo keydkaygii maskaxeed ayaan sida hillaaca u dhex qaaday, si aan u soo dhufto magacan la ii sheegay. Markiiba waxa igu soo dhacay kii iigu danbeeyay oo ah kii aan ugu aqoonta badnaa. Aniga oo naxsan, ayaan Xildhibaankii ugu jawaabay: “Sow kii xalay Boorame ka hadlayay.”
Xildhibaankiina wuxu iigu daray: “Waa run, bal se isaga oo soo socda ayaa baabuurkii la qallibmay, isaga, xaaskiisii iyo walaashii.” Markaas ayay naxdintii igu sii korodhay oo aan is-idhi, malaha reerkiiba wuu is-raacay. Is-moodsiiska iyo jileeca aadamaha awgood, ayaa mar mar qofku u qaataa in xanuunka oo keliya loo dhinto.